Ezona khrim zibalaseleyo kwizangqa ezimnyama zamadoda-Ingcebiso kunye nokhathalelo | Amadoda aQinisekileyo
Siyazi ukuba ubuso bethu businika kude kwaye ngakumbi ukuba unayo utyekelo lokuba nezangqa ezimnyama ngelixa umzimba wakho uziva udiniwe. Umzimba xa ungahambi kakuhle ubeka into yawo ukudinwa emehlweni ethu kwaye ngamaxesha anje kufuneka uthathe amayeza kunye neyona intle Iikhrim zesangqa esimnyama eyamadoda.
Umhlaba wezithambiso wenze inkqubela phambili kuyo yonke into enxulumene nokhathalelo lomntu kwaye ibonisa oku ngeemveliso ezininzi ngakumbi nangakumbi. Kukho ukunqongophala kwamadoda afuna iimveliso abazifunayo kwiimpawu zokuqala ukuvelisa ezona zonyango zibalaseleyo.
1 Ezona khrim zizizangqa ezimnyama emadodeni
1.1 Iikhrim ezingaphantsi kwe-10 euro
1.1.1 Ingcali yeL'Oréal Paris yamadoda
1.1.2 Ukhuseleko lweBulldog izangqa ezimnyama
1.1.3 I-Dermacol-Isiseko sokwenza i-Hypoallergenic
1.2 Iikhrim zesangqa esimnyama ngaphezulu kwe-15 euro
1.2.1 I-Bio Lab-Cream yeebhegi kunye nezangqa ezimnyama
1.2.2 I-Biotherm Homme Iyonke
1.3 Izangqa ezichasene nobumnyama ngaphezulu kwama-euro angama-25
1.3.1 Clinique yaMadoda
1.3.2 Isafire yendalo
1.3.3 I-Shiseido yamadoda
Ezona khrim zizizangqa ezimnyama emadodeni
Kukhetho lwethu lweekhrim sikhethe ezona zilungileyo Iikhrim zesangqa esimnyama inokufumaneka kwintengiso. Ukuze ufumane umbono, ayisiyiyo nje kwaphela into exabisekileyo exabisekileyo kuba ngohlahlo-lwabiwo mali oluncinci unokukhetha umgangatho ongcono kunye nesiqinisekiso esihle.
Iikhrim ezingaphantsi kwe-10 euro
Ezi khrimu zinexabiso eliphantsi, kodwa ngaphakathi kuhlahlo-lwabiwo mali sikwazile ukufumana uhlobo oluthile lophawu olusebenzayo kwangoko kwaye olunceda ukulwa imigca yokubonisa, ukugoba kweenkophe, iinyawo zenkawu kunye neengxowa ezicaphukisayo.
Ingcali yeL'Oréal Paris yamadoda
Ikhrimu ehlaziyayo, ehambisa amanzi kunye nengathambisiyo okanye incamathele ngokulula. Yilwa imiqondiso emi-5 yokwaluphala kwaye yenziwe ngohlobo lwe- Isidiliya FrenchIsixhobo esinceda ukukhusela ulusu kugonyamelo.
Ukhuseleko lweBulldog izangqa ezimnyama
Le mveliso iza isiza kwifomathi ukuze uyisebenzise ngokulula. Iziphumo zalo zihlala zisebenza kwaye kuyabonakala ukuba indlela ukudumba ujikeleze amehlo kunye nokuphucula ukubonakala kwayo. Iqulethe i- ivumba elimnandi Ngezithako ezikhethekileyo ezinjengeoyile yeavokhado, ikhukhamba kunye nokukhupha i-ginseng yaseBrazil.
I-Dermacol-Isiseko sokwenza i-Hypoallergenic
Ungayifumana le khrimu ngamanye amaxesha ungaphantsi kwe-10 euro. Isisombululo sakho asenzi nyango, kodwa Kukulungele ukufihla izangqa ezimnyama ngoku sele isiseko sombala ukunika ukugqiba kwendalo. Ine-SPF 30 kwaye i-hypoallergenic kuba isimahla kwiikhondom.
Iikhrim zesangqa esimnyama ngaphezulu kwe-15 euro
Izithako zayo sele zikhetheke ngakumbi, ngexabiso eliphezulu elisahleli lingenakubethwa kwaye liqinisekisa ukulwa imiqondiso yobudala. Ewe kunjalo, kufuneka uzikhathalele ngokulinganayo ekutyeni nasekuphumleni.
I-Bio Lab-Cream yeebhegi kunye nezangqa ezimnyama
Iqinisekisa ukupheliswa iingxowa, izangqa ezimnyama, iinyawo zosiba, imibimbi, kunye neenkophe ezijingxileyo. Ukusetyenziswa kwayo kuyacetyiswa kude kube kabini ngemini, enye ebusuku enye kusasa, ukufumana iziphumo ezilungileyo. Ubume bayo buqukethe izithako zendalo kunye nezinto eziphilayo ezinje ngequinoa ekhutshwe, ibhotolo ye-shea, ijojoba, i-elasin kunye ne-panthenol, ngaphandle kwee-parabens, utywala kunye ne-sulfates. Ke ngoko yikhrimu efanelekileyo kulusu olubuthathaka.
I-Biotherm Homme Iyonke
Le cream isebenza unyango emini nasebusuku kunye neziqinisekiso ukunciphisa iingxowa kunye nezangqa ezimnyama. Ijeli yayo ethambileyo kunye nehlaziyayo enefuthe lokunciphisa into iya kushenxisa yonke le miqondiso yokudinwa, ikwaqulathe izithako ezikumgangatho ophezulu zokulwa imibimbi kunye neempawu zokwaluphala. Yikhrimu ekhethekileyo emangalisa ukuyila ukukhanya kunye ne-elasticity kule ndawo.
Izangqa ezichasene nobumnyama ngaphezulu kwama-euro angama-25
Ukunyuka kwamaxabiso, kokukhona kuqinisekisa uninzi lweemveliso kwintengiso ezinokusinika. Ukuba ezakho azizizo iikhrimu eziqhelekileyo kwaye ngexabiso elinokufikeleleka ngakumbi, ke siyacebisa ukuba ezinye ziphuculwe kwaye zineziphumo ezilungileyo.
Le mveliso ivela kwi-brand enika iziqinisekiso ezilungileyo kakhulu kunye neziphumo. Iphucula ukubonakala kwemibimbi kunye nemigca emihle. Le khrimu ayiqulathanga ivumba lokuyenza intle kakhulu ukuba uxabane kunye nokwakheka kwayo kubonakala njengezithako ezinje shea ibhotolo, iti eluhlaza kunye caffeine. Kukulungele ukuguga kwaye kuvavanyelwa iingxaki ezinokubakho zamehlo.
Ingumda osele uqalile ukunika ukujonga okungagungqiyo okuqinisekisa iziphumo zawo. Izithako zalo ezisekwe kwi inkumba, i-panthenol kunye ne-hyaluronic acid zizodwa zokulwa ukwaluphala. Ukwenziwa kwayo kuyenza inyibilikise kwaye ikhethekileyo kulusu olubuthathaka Kwaye ngokungathi ayonelanga, iqulethe iivithamini A, C no-E ukulwa neempawu zokubonisa, izangqa ezimnyama namaqhakuva.
Le khrimu yinguquko kwaye amadoda esele eyizamile aqinisekisa iziphumo zayo ezilungileyo kwiiveki nje ezimbalwa. Ukuqulunqwa kwayo kuku-state-of-art kwaye kuyasebenza yonke imiqondiso yokudinwa nokuguga. Ubume bayo busekwe kwiinaliti ze i-hyaluronic acid ivuselela imveliso yendalo ye-collagen kwaye ke ngaloo ndlela ifezekise ulusu olugudileyo nolufanayo.
Akufanele silibale ukuba izangqa ezimnyama ziyaphuma ngenxa yobudala kwaye ziphantsi koxinzelelo oluphezulu, ukusebenza okanye ukudinwa okupheleleyo. Ukutya okunokulinganisela ukuya kuthi ga kwinqanaba elikhulu kunceda ukunqanda ukugcinwa kolwelo kunye nokugcina ulusu lwethu lusempilweni. Ukwazi amanye amaqhinga ungafunda elinye inqaku lethu ususa njani izangqa ezimnyama.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ezona zixhobo zokuthambisa kwizangqa ezimnyama zamadoda